Shrimp on crispy fried bean vermicelli | Colourful Recipes
ရုံပတေသီး မဆလာချက် →
Shrimp on crispy fried bean vermicelli
Mung beans are deep fried just forafew seconds.
ရွှေမှာတုန်းက MRTV ကနေ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ရုပ်ရှင်ကား မလာခင်မှာ ယန်းကန်းcook ဆိုပီး ချက်နည်း ပြုတ်နည်း ဇာတ်လမ်း လာတယ်။ အဲဒီမှာ ယန်းကန်း cook က ပဲကြာဇံကို ခွက်ပုံစံ လုပ်ထားပီး ဆီနဲ့ ကြော်တာ ကြည့်ဖူးတယ်။ အဲဒီ ပဲကြာဇံခွက်ကြော်လေးထဲမှာ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ထားတဲ့ ဟင်းကို ပွဲလှ လှ ပြင်ပေးထားတာလေ။
crispy fried bean vermicelli
ပုစွန်ကြော်ကြီးပဲဆို ရိုးနေမှာစိုးလို့ ပဲကြာဇံကြော်လေးနဲ့ တွဲဖက်ပီး ဟင်းပွဲ ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ ဆီကြော်အစားအသောက်တွေ စားပီးရင် လည်ချောင်းထဲမှာ အဆီတွေ မကပ်အောင် ဂေါ်ဖီထုပ် ပါးပါးလှီးထားတာနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးသင့်ကြောင်း ရွှေက စားသောက်ဆိုင် Chef က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရွှေက စားသောက်ဆိုင်တွေ … ဟင်းတချို့မှာ အကြော်အလှော်တွေ နဲ့အတူ ဂေါ်ဖီ ပါးပါးလှီးထားပီး ဟင်းပွဲပြင်ပေးထားတတ်ကြပါတယ်။
crispy fried mung bean vermicelli and fried shrimp
mayonnaise နှင့် တို့စားရင် စားလို့ ပိုကောင်းတယ်။
These noddles are sometimes labeled ” vermicelli ” at the asian store. Filipinos call them sotanghon. They’re like glass noddles made from mung bean.
ပဲကြာဇံကို ဆီပူထဲ မီးမြေးမြေးနဲ့ ထည့်ကြော်လိုက်ပါ။ ငါးမုန့်ကြော်သလိုမျိုးပဲ ကြော်မယ့် ပဲကြာဇံတွေ အကျက်ညီအောင် ကြော်တဲ့ ဇွန်း နဲ့ ဖိပီး ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (သားသားကတော့ ပဲကြာဇံကြော်တွေ ကြိုက်မှ ကြိုက်ပါပဲ။ ဒီအတိုင်းပဲကို ယူစားတာ)
ပုစွန်တွေကို ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်ဥအနှစ်နဲ့ နှယ်ထားပီး ….
အကြော်မှုန့်ကို ထမင်းချက်တဲ့ ခွက်နဲ့ အကြော်မှုန့် တခွက်၊ ရေတခွက်နှုန်းနဲ့ ဖျော်ထားလိုက်ပါ။
ပုစွန်ကို မုန့်နှစ်နဲ့ ကပ်ပီး မီးမြေးမြေးနဲ့ ကြော်ထားသော ပုစွန်ကြော် ….
By Thet Nandar • Posted in Bean Vermicelli Recipe, Cooking Ingredients, Fried Recipe, Prawn Recipe, Thiriyatanar's Special	• Tagged bean vermicelli, cooking, dinner, food, Shrimp